တရုတ်နိုင်ငံ: ငါတရုတ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံမှသင်၏ကျောင်းသားများကိုနားလည် | USAHello | USAHello
တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏ကျောင်းသားများအဖွဲ့ '' နားလည်မှု. တရုတ်နှင့်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားများလေ့လာသင်ယူ.
သူတို့ကွဲပြားခြားနားသည့်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံဖြစ်ကြောင်းကျောင်းသားများကိုသင်ပေးသူအများအပြားဆရာများအဆိုအရသူတို့ကျောင်းသားများကိုအကြောင်းကိုလုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များမခံမယူကြဘူး. သငျသညျဒုက္ခသည်ကျောင်းသားများအတွက်သင်ပေးပါကအသစ်ရောက်လာနောက်ခံနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်. အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသင်ကြောငျးသားမြား၏ထူးခြားသောသင်ယူမှုစတိုင်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းယဉ်ကျေးမှုတုံ့ပြန်မှုပညာရေးမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးနိုင်အောင်, အရှိဆုံးအဓိကအချက်ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးရန်ရည်ရွယ်နေသည်.
စံတရုတ် Mandarin သို့မဟုတ် (အရာရှိ) ; အားလုံးတိုင်းပြည်အပေါ်တုံနှင့်အခြားသောတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများမပြောတတ်မ.
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အမျိုးသား, အမျိုးသမီးအကြားစာတတ်မြောက်ရေးယေဘုယျအားဖြင့်တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပညာရေး၏အရေးပါမှုကိုပြသရာမြင့်မားတဲ့နှုန်းကိုဖြစ်ကြ၏. တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးပြီးကတည်းက (1966-1976) အဆိုပါပညာရေးစနစ်တိုးတက်စေရန်သိသာထင်ရှားသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, တရုတ်, စီးပွားရေးခေတ်မီခိုင်ခံ့စေ၏အရေးပါမှုအတွက်ပညာရေးစနစ်၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Highlighted. သငျသညျတရုတ်ကလေးငယ်များပညာရေး၏အရေးပါပုံကိုသတိပြုမိကြသည်ကိုသတိပြုမိစေခြင်းငှါ.
အကြောင်းတရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်း, အချိန်မှန်, လုံ့လဝီရိယ, လေးစားမှု, ဘုံအလေ့အကျင့်, အထူးသဖြင့်တရုတ်ကျောင်းသားများအတွက်. ဆရာပြောသောအခါထိုင်ဆက်လက်လေးစားမှုဖြစ်ပါသည်. တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၌အရေးကြီးသောလေးစားမှု၏အခြေခံမူစာသင်ခန်းထဲမှာထင်ဟပ်စေနိုင်သည်.
မိသားစုများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု / ကြောငျး
တရုတ်ကလူနှုတ်ဆက်သောအခါ, သက်ကြီးရွယ်အိုများစားပေးမှု. ဒါကကျနော်တို့အခြားသူများကိုချီးကျူးရှေ့မှာအကြီးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏မှယဉ်ကျေးကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်. ဒါဟာမစ္စတာနေဖြင့်တရုတ်လူကြီးများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လည်းအရေးကြီးပါသည် ,မစ္စသူတို့ရဲ့မိသားစုအမည်အပြင်အလှမယ်။ မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမည်များ. အမြိုးသမီးမြားကိုယေဘုယျအားလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှာသူတို့ဘွဲ့နာမကိုထိန်းသိမ်းရန်. ငါတို့သည်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခေါင်းစဉ်ကနေတဆင့်တရုတ်လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံနေကြတယ်. ဥပမာ, အမည်ပြောင် Xiang ခေါင်းစဉ်သုံးပြီး: အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Lee ကသို့မဟုတ် Lee ကဒါရိုက်တာ.
တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတာဝန်ရှိသူတဦးနှင့်သင်ကပြသနိုင်ဖို့စကားပြောဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. Greeting ယောက်ျားမိန်းမတို့လက်ဆွဲပါဝင်သည်, သင်မိသားစုသို့မဟုတ်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ရှိသည်မဟုတ်လျှင်စကားဝိုင်းမှာနည်းနည်းထိသို့မဟုတ်လုံးဝမဆက်သွယ်ရလည်းမရှိ. ယေဘုယျအားဖြင့်တရုတ်သူစိမ်းထိမုန်း. တရုတ်ကလူကိုယ်ချင်းစာ၏စကားရပ်၏ပုံစံအဖြစ်ကိုယ်ထိလက်ရောက် Amskk လျှင်သို့သော်အံ့သြသွားဖြစ်ပါဘူး.
မိသားစုဆက်ဆံရေးစုပေါင်းယဉ်ကျေးမှုမိသားစုများနီးကပ်စွာတရုတ်ကြောငျးသားမြား၏ဘဝအသက်တာ၌ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုဆိုလိုသည်မှတ်တမ်းတင်. တရုတ်ကျောင်းသားများကိုမိဘများဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ဘဝအသက်တာ၌သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများနည်းလမ်းများလေးစားမှုအပေါ်ထို့အပြင်အလေးပေး. ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းအဟောင်းမောင်နှမနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အထက်မောင်နှမအငယ်. ကျောင်းသားများနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သည့်အခါထိုကွောငျ့,, ကပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေကနားလည်ရန်မိသားစုဝင်များစကားပြောသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်များအပေါ်အခြားနည်းလမ်းရှာပညာရှိဖြစ်၏. သင့်အနေဖြင့်တရုတ်မိသားစုအတွင်းမှာအစဉ်အလာမိသားစုဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၎င်း, အဟောင်းတွေမောင်နှမမှပထမဦးဆုံးစကားပြောနှင့်တင်းကျပ်အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သဘာဝအဆင့်ဆင့်ကနေတဆင့်မိသားစုထဲမှာ dilution ပြဿနာပြဿနာများကိုရှောင်ရှားစေခြင်းငှါနိုင်ပါတယ်.
တရုတ်စကားပြောဆိုမှုသွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ထိုစကားများနောက်ကွယ်မှအခြေခံအဓိပ္ပာယ်ကိုအနက်ကိုဘော်ပြပေးရန်လိုအပ်ပါမည်. စကားဝိုင်းမှာ, တစ်စုံတစ်ဦးကသူဘယျအရာကိုဆိုလို၏ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောစေခြင်းငှါ, (ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ကြောင့် privacy ကို၏ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်) ဒါကြောင့်အာရုံစိုက်နှင့်စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရန်မေးခွန်းများကိုမေးရန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
တိုက်ရိုက်မျက်လုံးချင်းလေးစားမှု, စည်းကမ်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှိုးများ, ဒါကြောင့်အမြင်အာရုံဆက်သွယ်ရေးကတဆင့်မိန့်ခွန်းကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အရေးကြီးတယ်. သငျသညျအဟောင်းများကိုကလေးများသို့မဟုတ်မိဘများစကားပြောတဲ့အခါ, လူတစ်ဦး၏ဦးခေါင်းကိုဖြတ်လေးစားမှုအခြားသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်.
တရုတ်ကျောင်းသားများကိုသို့မဟုတ် Min Nan Chinese မိသားစုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာတစ်ဦးကလက်ဟန်ခြေဟန်, လက်ညှိုးညွှန်ပြရန်ရည်ညွှန်းရှောင်ကြဉ်ရပါမည်. သင်၏လက်ကိုသို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ် XFX ကိုသုံးပါလုံးဝမယ့်အစား၏လက်ညှိုး၏လက်ညှိုးညွှန်ပြ. ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်သင့်လက်ချောင်းသို့မဟုတ် Sfirk တက်ကောက်နေလည်းရှောင်ရှား. Non-ဂုဏ်သရေရှိမဆိုသဘောထားအမြင်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဆက်သွယ်ရေး၏ဂုဏ်သရေရှိနည်းလမ်းသုံးပါ.
တရုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်နိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဝေဖန်မှုအဖြစ်, မူဝါဒအပေါ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရှောင်. အကောင်းဆုံးကိုသေးငယ်တဲ့ဆွေးနွေးချက်ယဉ်ကျေးအပြုသဘောလုပ်ဆောင်ချက်.
တရုတ်လူဦးရေရဲ့အများစုဗုဒ္ဓဘာသာ, ကွန်းဖြူးရှပ်ဝါဒနှင့် Taoism ၏အုပ်စုတစုကျင့်သုံး. ခရစ်ယာန်ဘာသာ, ပရို, ကက်သလစ်, Mormonism, အစ္စလာမ်နှင့်ဂျူးဘာသာကျင့်သုံးလူဦးရေရဲ့တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့လူနည်းစု. တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများကိုရီးယားအဓိကဟန်တရုတ်, Zhuang, Uygur, Hui, ရီ, တိဘကျ, Miao, မနျခြူး, လီး, အထင်ကရနေရာများအပါအဝင်အခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ၏လူဦးရေရဲ့သေးငယ်တဲ့အချိုးအစားဖြစ်ကြ၏.
အဆင့်ဆင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကြီးစိုးအထီးဖြစ်နေဆဲပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေပိုပြီးသာတူညီမျှလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာသောကြောင့်, မိန်းမတို့ရဲ့အမြင်များကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရှိရာ, ယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့်အမြင်များကို ပို. ရိုးရာကိုအဓိကအားထား. လုပ်သားအင်အားအတွင်းအမျိုးသမီးများ၏အချိုးအစားကြီးထွားလာသည်ပေမယ့သို့သော်ကြောင့်နေဆဲအမျိုးသမီးတွေကိုအိမ်ထောင်စုတာဝန်များထမ်းသောမျှော်လင့်ရပါတယ်.
သငျသညျရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်ကျောင်းသားများကိုကူညီပံ့ပိုးဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုပါသလား? ဆရာ, ဆရာမများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးသင်တန်းပေးဖို့ Subscribe.
တစ်ဦးကို PDF ဖိုင်အဖြစ်ဤအချက်အလက် Print
သင်လုပ်နိုင်သည် တရုတ်ကျောင်းသားရဲ့နောက်ခံကို Download လုပ်ပြီး PDF ဖိုင်အဖြစ်ဤအဓိပ်ပါယျ print ထုတ် ထိုအခါစာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.